Ukuphupha ngomthi Discover ➡️ ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Inkuni ikakhulu yindawo encinci yemithi ephantsi enokufumaneka phakathi emasimini okanye emadlelweni. Ihlala ingqokelela evaliweyo yezityalo ezifanayo okanye ezahlukileyo.
Ngapha koko, igama elithi "umthi" likwabhekisa kuhlobo lokukhula kwezityalo. Ezi zizityalo ezingapheliyo ezinomthi kunye namasebe aqingqiweyo. Elinye igama loku linokuthi "izityalo ezinobunzima."
Amahlathi aquka imithi emincinci, izihlahla, amahlahla, kunye neeliana. Kwakhona, imithi kunye nezihlahla ziyahluka kakhulu kubume kunye nobukhulu. Imithi emikhulu ngamanye amaxesha iphantse ifane nehlathi, ngelixa iintlobo ezincinci zikhumbuza uthango okanye ityholo. Ukongeza, imithi kunye namatyholo zibonelela ngendawo ekhuselekileyo kwiintlobo ngeentlobo zeentaka, ezinje nge-oriole.
1 Uphawu lwephupha «isityalo somthi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iinkuni» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iinkuni» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isityalo somthi» - ukutolikwa ngokubanzi
Uhlalutyo ngokubanzi lwamaphupha lubona kwisimboli yamaphupha «iinkuni» ukubhengezwa kwe utshintsho kwinqanaba lobuqu, iya kuba nonobangela wendalo. Oku kuthetha ukuba olu tshintsho aluzukunyanzelwa ukuba ulele ngaphandle, kodwa luya kukhokelela kuphuhliso lwendalo lwalo.
Inkuni eluhlaza ephupheni nayo ihlala izisa Suerte kunye nentuthuko entle ekuvuseni ubomi kunye naye. Ukuba, ngokuchaseneyo, ubona amahlahla anamagqabi amdaka ngebala ngelixa ulele, kuya kufuneka uzilungiselele okona kubi. Kuba umphuphi uya kuba nexesha elinzima kungekudala.
Nabani na obona iinkuni zivutha ephupheni lakhe, izicwangciso zakhe ziya kutyhilwa ngendlela afuna ngayo kwaye aneliseke. Kwakhona, ithamsanqa liya kuba kwicala lakho. Ukuba umphuphi uthengisa imihlaba enjalo, kufanele ukuba athathele ingqalelo eyakhe isigqibo Ziyaboniswa. Ngale nto, kunokwenzeka ukuba wenze imali kwixa elizayo.
Uphawu lwephupha «iinkuni» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lohlalutyo lwamaphupha, iinkuni zisephupheni njenge Bode kakuhle ubonwe ngokuvuka kobomi. Ukuba uphupha ngayo, unokulindela ukukhula ngaphakathi kwaye ishishini lakho liya kukhula kakuhle nalo.
Nangona kunjalo, ukuba ubanjiwe ephupheni kunye neempahla zakho kula matyholo, kufuneka ulumke el mundo yeewotshi. Kungenxa yokuba unokuzibhaqa ukwimeko enobungozi. Ukubona kwamagqabi asezantsi endle ephupheni kunokuba kukodwa. Cwangciso khomba ebomini bokuvuka. Umphuphi uhlala eziphatha ngendlela engalunganga kwiingcinga zakhe nakwiingcinga zakhe. Nokuba kwinqanaba leemvakalelo, libonisa ukungaguquguquki okuncinci.
Ukuba ukuphupha ngokwako kuhamba ngehlathi elincinci, oku kungabonisa ukuba kukwinyani yokwenyani. ulungelelwano Ukuzama kwaye ufuna ukulawula isimilo sakhe esingalawulekiyo.
Uphawu lwephupha «iinkuni» - ukutolika kokomoya
Izityalo ezimithi njengophawu lwephupha zingasetyenziswa ekutolikeni amaphupha okomoya njengophawu lwe ukungcola kokomoya Makuqwalaselwe. Umphuphi kufuneka azame, kwihlabathi elivukayo, ukuzisa ulwakhiwo kulwazi lwakhe kule ndawo.